Maxkamada Gobalka Banaadir oo maanta xukun ku riday eedeysanayaal kala duwan « AYAAMO TV
Maxkamada Gobalka Banaadir oo maanta xukun ku riday eedeysanayaal kala duwan
818 Views Date January 26th, 2014 time 9:34 am
Maxkamadda Gobolka Benaadir aya maanta Xukunno kala duwan ku ridday eedeysanayaal lagu soo eedeeyay falal kala duwan, kuwaasi oo saakay maxkamaddu ay dacwadoodu qaaday.
Maxkamadda Gobolka Benaadir ayaa maanta u fariisatay dhageysiga dacwado ka dhan ah eedeysanayaal gaaraya 15, kuwaasi oo ku kala eedeysan tuugnimo, kufsi, dil shil baabuur ah iyo falal kale, waxaana Maxkamadda u soo gudbiyay xafiiska xeer ilaalinta guud ee Qaranka.
Ehelada eedeysanayaasha iyo marqaatiyaal ayaa ku sugnaa gudaha Maxkamadda Gobolka Benaadir, iy adoo halkaasi lagu soo bandigay caddeymo muujinaya in qaaar ka mid ah eedeysanayaashaasi galeen dambiyada lagu soo oogay.
Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Maxamed Xasan Nuur ayaa sharaxaad ka bixiyay fal dambiyeedyada loo haysto 15ka qof ee Maxkamadda la horgeeyay.
Guddoomiyaha Maxkamadda Gobalka Benaadir Xaashi Cilmi Nuur ayaa ku dhawaaqay xukunnada maanta ay Maxkamaddu ku ridday qaar ka mid ah eedeysanayaashii Maxkamadda la horgeeyay, iyadoo isla maxkamaddu qaar ka mid ah kiisaskooda dib u dhigtay, kuwaasi oo loo waayay caddeymo ku filan halka afar ka mid ah dadkaasi lagu xakumay xabsi.
Maxkamadda Gobalka Benaadir ayaa maalmahaan ku howlan qaadista kiisas kala duwan.